'Hellraiser' Hunhu Vakabatana 'Vakafa Masikati' - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Hellraiser' Hunhu Vakabatana 'Vakafa neMasikati'
'Hellraiser' Hunhu Vakabatana 'Vakafa neMasikati'
Iye Hellpriest uye Iye Chatterer Vasvika
by Trey Hilburn III September 12, 2021 1,615 maonero
Dead nokuda Daylight waita rinonakidza basa rekumisikidza iyo izere nyeredzi roaster yezvinotyisa mifananidzo. Zvakanaka kutukwa zvinoyemurika. Tinofanira kuwana timu yavo yepamutemo pane yese NeChishanu iyo 13th kukanganisa. Ivo vatove naGhostface, Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface nevamwe uye ikozvino vawedzera Hellraiser vatambi.
The Hellraiser mavara anosanganisira Iye weGehena Mupirisita uye Iye Chatterer iyo ini yandaigara ndichinongedzera seChatter Bhokisi asi, uko unayo.
Mumwe nemumwe weavo vatambi akagashira matrailer avo. Imwe ine Iye Here Mupirisita ichibvarura muridzi webhokisi nyowani. Ipapo hunhu kuongorora kweiye Chatterer.
Mutambo uyu isometric nhandare wakapona uko iwe nevamwe vatatu vatambi muchiedza kutiza matsotsi evapambi vari kukuvhima. Dead nokuda Daylight yanga iri kunze kwechinguva ikozvino, uye inongoramba ichiwedzera kuwedzera uye yakawanda mavara kune yayo rosta.
Ini pachangu, ndakasangana manzwiro pamutambo. Ini ndagara ndichinzwa kuti madhairekitori emutambo agara achinzwa akaomarara uye senge asingateereri. Haisati yave inodiwa neyangu nekuda kweanodzora uye maitiro ayo akajeka. Asi, ndakaramba ndichidzokera zvisinei. Ini handikwanise kupfuudza pamikana yekutamba seizvi zvinotyisa mifananidzo.
Kuita kuti zvinhu zvinyanye kunakidza, mumwe nemumwe wevatambi anouyawo nematanho avo. Semuenzaniso, Michael Myers anouya nenhanho yeHaddonfield.
The Hellraiser DLC yevakafa neMasikati inowanikwa Sept. 20 pa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Chinja, uye Steam.